चीन भ्रमणपछि मर्केल स्वदेश फिर्ता, भ्रमण उपलब्धिपूर्ण भएको ठहर !
Fri, Feb 28, 2020 at 1:15pm
इरानमा कोरोनाका कारण ३४ व्यक्तिको मृत्यु #आहा खबर# प्रधानमन्त्रीलाई नेता नेपालले दिए चेतावनीयुक्त सुझाव #आहा खबर# चक्रपथ सडक विस्तारकाे जिम्मा चिनियाँ टोलीलाई #आहा खबर# अर्बाैं लगानी भएका अलपत्र सयौं ठेक्कालाई फेरी म्याद थप #आहा खबर# तेजाब प्रहार गर्नेलाई जरिवाना सहित आठ वर्ष कैद #आहा खबर# दिल्ली हिंसामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३५ पुग्यो, मुस्लिम समुदाय त्रासमा #आहा खबर# प्रियंका र आयुष्मानले गरे बिहे #आहा खबर# संसदबाट किन भाग्‍ने ? सबै जवाफ दिन तयार छु : प्रधानमन्‍त्री ओली #आहा खबर# कर बढे पनि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य नबढ्ने #आहा खबर# साहित्य महोत्सव धनगढीमा विश्वभरिका नेपालीभाषी साहित्यकारहरूकाे जमघट #आहा खबर# बानेश्वरकाे भव्य विवाहमा दुलाहानै नआएपछि मच्चियाे हल्लीखल्ली #आहा खबर# बिहीबार सार्वजनिक बिदा #आहा खबर# १६ प्रहरीले बाँडीचुँडी खाए तस्करीकाे ३६ तोला सुन #आहा खबर# ओलीसहित सबै प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न बाबुराम भट्टराईकाे माग #आहा खबर# आजदेखि मौसममा सुधार, शनिबार फेरि वर्षा #आहा खबर#
बेइजिङ, २१ भदौ
जर्मनीका चान्सलर एङ्गेला मर्केल चीनको दुई दिने भ्रमण सम्पन्न गरी शनिबार स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ । जर्मनीको चान्सलरमा नियुक्त भएयता १२ पटकसम्म चीनको भ्रमण गरिसक्नुभएका मर्केलको भ्रमणले चीन जर्मनीबीच सहकार्यका नयाँ सम्भावनालाई स्वागत गरेको उल्लेख दुबै देशका अधिकारीहरूले गरेका छन् ।
भ्रमणबाट चीन र जर्मनीबीचको सम्बन्धको घनिष्टता र महत्वलाई थप पुष्टि गरेको बेइजिङले बताएको छ । उहाँको भ्रमणबाट श्रृंखलाबद्ध आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग उपलब्धि भएको बताइएको छ ।
दीर्घकालदेखि चीन र जर्मनीबीचको सम्बन्ध पनि चीन र अन्य पश्चिमा मुलुकसँगको सम्बन्धहरुजस्तै अगाडि बढ्दै गएको छ । वर्तमान विश्व परिस्थिति जटिल बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा यी दुबै मुलुकबीचको सम्बन्धको विकास सारा विश्वको शान्ति तथा स्थिरताका लागि हितकर हुने मर्केलले बताउनु भएको छ । चान्सलर मर्केलको यस भ्रमणको लक्ष्य चीनसँगको आर्थिक सहयोगलाई गहन पार्नु नै भएको बताइएको छ ।
मर्केलद्वारा व्यक्त एक भनाईलाई उल्लेख गर्दै चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्, “अन्य मुलुक जस्तै चीनसँग पनि विकासको अधिकार छ । चीनको विकास प्रगतिमा बाधा सिर्जना हुँदैन ।”
उहाँले थप्नुभयो, “चिनियाँहरुले राम्रो जीवन पाउनु नै सारा विश्वका विभिन्न मुलुकको हितसँग अनुकूल छ । यो चीनलाई सम्झना गर्ने राजनीतिज्ञले चीनको विकासका लागि गर्नुभएको एक उचित मूल्याङ्कन हो ।”
सन् २०१९ को पहिलो सात महिनामा चीनमा जर्मनीको लगानी ६२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको बेइजिङले जनाएको छ ।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता काओ फेङले हालै दिएको जानकारीअनुसार सन् २०१९ को जनवरीदेखि जुलाईसम्ममा चीनमा जर्मनीको लगानी एक अर्ब १७ करोड अमेरिकी डलरले वृद्धि भएको र द्विपक्षीय व्यापारमा २.४ प्रतिशतले वृद्धि भई झण्डै एक अर्ब सात करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
त्यस्तै चीनले जर्मनीमा सोही समयमा एक अर्ब १ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको र यो अघिल्लो बर्षको तुलनामा २७.६ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
जर्मनीका लागि चीन लगातार तीन वर्षसम्म सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएको छ । जर्मनीका कम्पनीहरूका लागि चीन एक मन पर्ने गन्तब्यका रूपमा रहेको काओले उक्त अवसरमा बताउनुभयो ।
सन् २०१८ मा चीन र जर्मनीबीचको द्विपक्षीय व्यापार ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो जुन अहिलेसम्मकै उच्च दर हो । यसबाट दुई देशबीचको कारोबार एक खर्ब ८३ अर्ब ९० करोड पुगेको थियो ।